Kupfeka Fekitori | Wholesale Kupfeka Vagadziri, Vatengesi
Fekitori Yakananga Vakadzi O Neck Mesh Kuchekesa Maxi Shiny Kuwedzera Saquin Mapfekero
Iyi inoshamisa mesh yekumonera sequin chipfeko chine fashoni uye chinoshamisira, ichiita mwaka wepati uyu kunyanyisa kupenya. Iyi inofadza yepakati-kureba madzimai mapfekero akagadzirwa ne sequins uye mesh kusona. Iyo yakanaka yekutendeuka-kutenderera mapfekero ako epati manheru.
Yakakwira Mhando Yakasimba Solid Ruvara Lace Kusungira Yakashongedzwa Matatu-quarter Sleeve Casual Plus Saizi Vakadzi Maxi Mapfekero
Iyi yakashongedzwa yevakadzi yakasimba ruvara O-mutsipa 3/4 sleeve mabiko mabiko madiki-akakodzera mabvi-kureba chipfeko chakagadzirwa chiffon nemachira machira, akareruka uye akapfava. Inokodzera mapato, mabiko kana zvimwe zviitiko zvepamutemo.
Yakagadzirwa MuChina Contrast Ruvara Uye Saizi Yekupfeka Mukadzi Akashongedzwa Vakadzi Mapfekero Akasarudzika
Iyi yakashongedzwa uye yakapepuka chiffon chipfeko inoratidzira isina-papfudzi maoko mapfupi uye nerudzi-runovharidzira chena muganho dhizaini, iyo inowedzera kutaridzika kunoshamisa uye inotonhorera uye yakagadzikana. Iyo yakapfekedzwa jira inoratidzira inoyevedza yemanheru maitiro ayo akasarudzika. Inokodzera mapato, mabiko kana zvimwe zviitiko zvepamutemo.
China Factory Ladies Knee Kureba Maxi Chiffon Kuwedzera Saizi Bodycon Kupfeka KweZhizha
Iyi chiffon inotsvaira Maxi suspender chipfeko, inopenya suspender siketi ine mwenje chiffon shati, yakasununguka, inofema, inonakidza uye inofadza. Iri jasi remanheru rakanakira zviitiko zvezuva nezuva, mapato emanheru uye makirabhu.
Vakadzi Solid Sexy Saizi S-5XL Kuwedzera Saizi Yakatsemurwa Kumashure Pazasi Bodycon Kureba Papfudzi Chiffon Kupfeka KweZhizha
Manera akachekwa anozoita iwe unoshamisira uye unofadza.
Bodycon dhizaini inogona kuratidza yako yakanaka chimiro.
Inokodzera pati yemanheru, mabiko, kirabhu, nezvimwe.
Amazon inopisa chimiro sekisiketi halter tambo isina back midi yakatetepa kupfeka penzura siketi vakadzi madhirezi
Chipfeko chechipfuramabwe chakanakisa uye chine fashoni, uye dhizaini yekukomberedza-inosimbisa chimiro chako. Shandisa jira rakanaka, rakareruka uye rinofema. Madhirezi epati uye madhirezi ezuva nezuva anowanikwa
Amazon inopisa Slim 2021 yeEuropean neAmerican Zhizha Nyowani Chigadzirwa Yakadhindwa Halter Split Hip Skirt Yevakadzi mapfekero echikadzi
Iri jasi rakagadzirwa neshinda yakasununguka uye yakasununguka, yakapfava uye inofema, ichiita kuti unzwe uine hutano hwakanaka uye wakasununguka kupfeka. Chipfeko ichi chinotaridzika chaizvo uye chine mutete. Mucheka wakakombana, kureba pamusoro pebvi, uye mutsipa wekare wedenderedzwa, ratidza chimiro chako chebonde chaizvo. Inokodzera kudanana kwezuva nezuva uye zviitiko zvepati.
Vatsva Vanosvika Vakadzi Vanosekesa Spaghetti Sunga Bhanhire Mapfekero Vakadzi Tie Dye Kupfeka Kirabhu Mapfekero eKirabhu Party.
Iri jasi rakagadzirwa neshinda yakasununguka uye yakasununguka, yakapfava uye inofema, ichiita kuti unzwe uine hutano hwakanaka uye wakasununguka paunenge uchipfeka. Matayi-dhayi mapatani uye mashoma masitaera anosimbisa runako rwechimiro chako.
Nyowani Dhizaina Vakadzi Yakareba Sleeve Dzorera Pasi Collar Pamberi Bhatani Bhandi Rokupfeka Bhurauzi Kupfeka Shirt Yakajairwa Mapfekero
Iri jasi rakagadzirwa neshinda yakasununguka uye yakasununguka, yakapfava uye inofema, ichiita kuti unzwe uine hutano hwakanaka uye wakasununguka paunenge uchipfeka. Dhizaini dhizaini inoenderana neyakagadzirwa bhandi kuratidza hunhu hwako.
DR80041 OEM pamwe saizi o mutsipa Elastic chiuno zvakajairika maxi satin refu sleeve yakashongedzwa maruva bodycon bhandeji rokwe maruva matsutso
Iyi hombe-saizi-refu-isina maoko maruva chipfeko inoyevedza kwazvo, yakakodzera kune avo vhiki yebrunch zvirongwa. Yakakura nzvimbo yemaruva mapatani, fashoni runako, wedzera hunhu hwako. Isu tinoda hembe iyi zvakanyanya, ine tambo-dzakakwirira zvitsitsinho uye mapaundi eakagadzirirwa mhete.
Makiyi Akakosha Sanganisira:
Rudzi rwemuenzaniso: Maruva
Kureba kweSleeve: Yakareba Sleeve / Sleeveless
Sleeve Rudzi: Yakajairika Sleeve
Mutsara wechiuno: Chiuno chakakwirira
Mwaka: Chitubu / Kudonha / Zhizha
123456 Inotevera> >> Peji 1/15